निलम खनाल: नगरवासीको हितमा मात्र काम गर्ने मेयर | छलफल
निलम खनाल: नगरवासीको हितमा मात्र काम गर्ने मेयर
बराहा नगरपालिका, सुनसरीका मेयर निलम खनाल
मेयरसाब दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
जनप्रतिनिधिको जीवन नगरवासीका समस्या समाधान र विकास निर्माणका काम गर्दै बितिरहेको छ ।
काम कत्तिको भइरहेको छ त ?
मुलुक सिस्टममा छैन, संघीयताको अभ्यास नयाँ छ, हाम्रो पनि कामको अनुभव नयाँ नै हो, जनताका अपेक्षा अधिक छन्, राज्यको स्रोत साधन कम छ, मुलुकको क्षमताअनुसार काम त भइरहेकै छन् तथापि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न र मुलुकलाई सिस्टममा लैजान केही समय लाग्छ ।
जनताले बढी के कुराको माग गर्छन् ?
नागरिकता, पासपोर्ट सिफारिस, नक्सापास, धारा, बत्ती, सडक निर्माण, खानेपानी, विभिन्न प्रकारका मुद्दामामिला मिलाउने, प्रशासनिक काममा छिटो छरितो कामदेखि रोजगारी र विकास निर्माणका कामको माग बढी छ ।
जनताको चाहनाअनुसारै गरिरहनु भएको छ ?
ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर जनताको माग समेट्ने गरी काम गरिरहेको छु ।
काम गर्न कत्तिको समस्या छ ?
मान्छेको सोच र शैली यही हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था यही हो, धेरै समस्या छ ।
तपाईंको जन्ममिति र ठेगाना बताइदिनुस् न ।
म २०१८ साल चैत्र १३ गते आसामको मेघालयमा जन्मेको हुँ । म सानै हुँदा २०२० सालमा नेपाल आएर सुनसरीको चकरघट्टीमा बसोबास ग¥यौं । २०२४ सालमा हालको बराहा नगरपालिका वडा नं ४ मा आएर बसेका हौं ।
मेघालयबाट कुन परिस्थितिले नेपाल ल्यायो ?
बुवा सचेत हुनुहुन्थ्यो त्यसैले अर्काको देशमा यो जंगलमा बस्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर बस्नुपर्छ, छोराछोरी आफनै देशमा पढाउनुपर्छ भनेर आउनुभएको रहेछ ।
बुवा बितिसक्नु भयो हाल आमा, ५ दाजुभाइ, १ बहिनी, श्रीमती, एक छोरा र एक
छोरी छौं ।
आमाबुवा के गर्नुहुन्थ्यो ?
खेती किसानी काम गर्नुहुन्थ्यो ।
उहाँहरूको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो नि ?
बुवा मिलनसार, मेहेनती, अनुशासित परोपकारी हुनुहुन्थ्यो, आमा कडा मिजासको
मेहेनती हुनुहुन्छ ।
यहाँको परिवार कुन वर्गमा पर्दछ ?
खान लाउन पुग्ने निम्न वर्गीय किसान परिवार हो हाम्रो ।
तपाईं सानोमा के के गर्नुहुन्थ्यो ?
डोको नाम्लो बोक्ने, घाँस दाउरा काटने, ढिकी जाँतो गर्नेदेखि हलो जोत्ने कोदालो खन्नेलगायत किसानले गर्ने सबै काम गरेको छु ।
सानोमा झगडा गर्ने अन्याय नसहने खालको थिएँ पछि राजनीतिमा लागेपछि त्यो स्वभाव पूरै परिवर्तन भएर मिलनसार सबैलाई सहयोग गर्नेमा रूपान्तरण भएँ ।
मिलनसार हुँनुहुँदो रहेछ, कुट्ने कुटाइ खाने काम त भएन होला नि ?
अनेरास्ववियुमा काम गर्दा पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाका विरुद्ध लाग्दा एकजना सोझा सीधा गाउँलेलाई कुटेछु पछि थाहा भयो त्यसमा मलाई प्रायश्चित छ, पुलिस प्रशासनको कुटाइ पिटाइ कति खाइयो कति ।
पञ्चायती व्यवस्था हुकुमी र निरङ्कुश शासन थियो, शिक्षाको अवस्था राम्रो थिएन ।
कमिटेड रूपमा २०३८ सालदेखि लागेको हुँ ।
चिनियाँ क्रान्तिले म प्रभावित भएको थिएँ, गरिबलाई थिचोमिचो गर्ने सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरी सबैले गरी खाने प्रगतिशील शासन व्यवस्था ल्याउन ।
जेल पर्ने त सामान्य कुरा हो, कति परियो कति । त्यो बेला कतिबेला मारिइने हो
थाहै हुँदैनथ्यो ।
गाउँकै भगवती प्राविमा पढेँ ।
राम्रो पनि थिएन, फेल पनि भइएन सामान्य खालको थियो ।
किसानी जीवन आर्थिक अभावले फि तिर्नसम्म बुवा आमालाई हम्महम्मे पर्दथ्यो ।
सानामा खान र खेल्नमा कस्तो रूचि हुन्थ्यो ?
खानामा यस्तो उस्तो भन्ने थिएन, सादा सामान्य खाना खान्थेँ खेल्नमा पौडी, कबड्डी
विवाह कोसँग कहिले र कसरी भयो ?
२०४८ सालमा मोरङ निवासी रामविना खनालसँग परम्परागत मागी विवाह भयो ।
कस्ले मागीदियो ?
उहाँ महेन्द्र मोरङमा पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँको चिनजानको मान्छे मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुरा चलाउनु भयो म आँफैले मागेँ पछि कुरा छिन्न बुवालाई लिएर गएँ ।
विवाहमा खर्च कति भयो ?
त्यो बेला खचै धेरै हुँदैनथ्यो त्यस्तै १५ हजार जति भयो होला ।
मेहेनती, सरल, इमान्दार,सहयोगी, आर्थिकलगायत सबै अनुशासनमा बस्न चाहने ।
श्रीमतीसँग के कुरामा प्रभावित हुनुहन्छ ?
मेहेनतका साथ घर चलाएकी छन्, अनैतिक काम गरेर पैसा कमाउनु हुँदैन भन्छिन्, आर्थिक अनुशासनमा कडा छिन्, मलाई गल्ती गर्नबाट जोगाउँछिन् त्यसले प्रभावित हुन्छु ।
त्यसो भए आर्थिकलगायत अन्य विषयमा ठाकठुक त पर्दैन होला नि ?
हाम्रो व्यवहार फरक फरक छ, हामी आर्थिक कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट गर्छौ, हाम्रो सापटी लिने दिने हुन्छ । आय आर्जनका व्यावसायिक बाटा छन्, कृषिबाट पनि आउँछ, खर्च धेरै गर्ने बानी छैन । मयरले पाउने ३० हजारले मलाई पुगिहाल्छ त्यसैले उनीसँग खटपट नै हुँदैन । दुःख बिराम भएको बेला पार्टी र अफिसको कामले घरमा समय दिन नसक्दा कहिलेकाहीँ सामान्य खटपट पर्छ तर हामी एकजना पानी भइहाल्छौ, मिलिहाल्छ ।
जागिर खानुभएन ?
भोजपुरमा ५ वर्ष शिक्षक जागिर खाँए ।
तलब कति पाउनुहुन्थ्यो र पहिलो तलब केमा खर्च भयो ?
सरकारी स्कुलमा पढाउँथेँ । त्यो बेला तलब ११ सय १२ रुपैयाँ थापेको छु र सो तलब डेरा खर्च चलाउनमै खर्च भयो ।
बढी मनपर्ने सीपी मैनाली हुनुहुन्छ । त्यसपछि देश, जनता र परिवर्तनका लागि योगदान दिने सबै अग्रज नेता मनपर्छ ।
बढी मन परेर पढेका पुस्तक कुन कुन हुन् ?
मोदनाथ प्रश्रितको नारी बन्धन र मुक्ति, ऋषि आजादको देश कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पुस्तक पढेको छु ।
एकोहोरो काममा लाग्ने, चाँडो विश्वास गर्ने, नेताको घरघरमा नधाउने, गुटमा नलाग्ने मेरो कमजोरी होला ।
आमाबाट अनुशासन, बुवाबाट नम्रता सिकेँ , श्रीमतीले राजनीति गर्न सहयोग पुग्ने गरी घर चलाइदिइन् उहाँहरू र विभिन्न घटना परिघटनाबाट भोग्दै सिक्दै आएँ यी सबै प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
सुख र दुःखको क्षण ?
२०४२ सालको बमकाण्डमा विनाकसुर आफूलाई पक्राउ पुर्जी दिँदा, मदन आश्रितको निधन हुँदा र पार्टी विभाजित हुँदा दुःख एवं २०४६ सालको आन्दोलन सफल हुँदा र गणतन्त्र आउँदा सुखको क्षण ।
भारतको मेघालयमा जन्मनु भएका निलम खनाल जिल्लाको राजनीतिमा र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान दिएका नेता हुनुहुन्छ । धनी झन् धनी भइरहने गरिब झन् गरिब हुँदैजाने सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न र समाज परिवर्तन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभएका उहाँले २०३७ सालदेखि राजनीति गर्दै आउनुभएको छ । अनेरास्ववियुको राजनीतिदेखि पार्टीको इलाका कमिटिहुँदै जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यसम्म रहेर कुशलतापूर्वक काम गर्नु भएका उहाँले २०३८ सालमा तत्कालीन मालेको पार्टी सदस्यता लिनु भएको थियो । जनतासँगै भिजेर २०५४ सालमा सुनसरीको भरौल गाविस उपाध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नुभएका उहाँले विभिन्न प्रकारका जिम्मेवारी निर्वाहा गरिसक्नुभएको छ । उहाँले शिक्षक,व्यवसायी, नगरप्रमुखलगायत विभिन्न भूमिकामा रहेर महत्वपूर्ण योगदान दिइसक्नु भएको छ । २०३८ सालमा कमिटेड राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्नुभएका खनालले पार्टी निर्माण विस्तारदेखि नीति निर्माण तहमा समेत रहेर सफल र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ । जनताको हित, मर्यादा र अनुशासनलाई सदैव शिरमा राखेर परिर्वतन र समृद्धिका लागि निष्ठापूर्ण राजनीति गर्नु भएका उहाँ सुनसरी जिल्लाका शालीन नेता हुनुहुन्छ । पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक रूपमा सवल र सक्षम बनाउने सन्दर्भमा विनास्वार्थ अगाडि बढ्ने उहाँ जिल्लाका नेता कार्यकर्ता र जनतामा परिचित हुनुन्छ । राजनीतिमार्फत जनताको हितलाई सँगै अगाडि बढाउनु भएका नेता निलमको लगभग ४ दशकको गतिशील राजनीतिक जीवन पछिल्लो समयमा आएर बराह नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा काम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । जनताको काममा अठार घण्टा बिताउने निलम क्रियाशील,अनुसाशित र जिम्मेवार नेतामा पर्नुहुन्छ । बाराही जनताको सुखी जीवनका लागि अहोरात्र खटिने उनै खनालको जीवन संघर्ष अनुभव, अनुभूति, रूचि र स्वभावका विविध पाटोलाई समेटेर जीवनचक्र प्रस्तुत गरेका छौं ।
अनुभव र अनुभूति :
भारतको मेघालयमा जन्मेर नेपालको सुनसरीलाई कर्मथलो बनाउनुभएका ५८ वर्षे जीवनयात्रामा हिँड्दै गरेका निलम खनालका बुवाको निधन भइसकेको छ भने आमा जीवितै हुनुहुन्छ । उहाँका ५ दाजुभाइ १ बहिनी, श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । उहाँ किसान परिवारबाट हण्डर ठक्कर खाँदै लड्दै उठ्दै जीवन चलाउँदै र परिवर्तनका लागि यातना खाँदै यहाँसम्म आउनु भएको छ । पढ्न, जीवन अगाडि बढाउन र समाज परिवर्तनका लागि अनगिन्ती संघर्ष गर्नु भएका खनालले थुप्रै तीतामीठा अनुभव, अनुभूति संगाल्नु भएको छ, आरोह अवरोह पार गर्नु भएको छ थुप्रै दुःखका भगाँलाहरू पार गर्नु भएको छ, पार्टीका काममा महत्वपूर्ण आयाम दिनुभएको छ, स्थानीय तहमा जनताका लागि महत्वपूर्ण काम गर्नु भएको छ, जसको सुख दुःख दुवै अनुभूति छ उहाँलाई । सुनसरी जिल्लाको गाउँले परिवेशमा हुर्किएका उहाँमा राजनीति, शिक्षा र समाजसेवाको गहिरो अनुभव छ । जीवनको परवाह नगरी समाज परिवर्तनका लागि भूमिगत राजनीति गरेको, चरम यातना खेपेको दुःखदायी अतित पनि छ, शिक्षा लिँदाको अभाव पनि छ, जनताले फूलमाला लगाइदिएको सुखद सन्दर्भ पनि छ, सामान्य किसानसँग बिताएको सन्दर्भ पनि छ उहाँसँग । त्यतिमात्र होइन आफैँ सहभागी भएर ल्याएको २०४६ सालको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ सालको गणतन्त्र प्राप्तिको सुखद क्षण पनि छ भने उहाँसँग मदन आश्रितको निधन हुँदाको दुःखद क्षण पनि छ । हलो जोतेको, कोदालो खनेको, घाँस दाउरा काटेको, विद्यार्थी राजनीति गरेको, पार्टीको राजनीति गरेकोदेखि नगरप्रमुखको रूपमा देश र जनताका लागि विकास निर्माणका काम गरेको अनुभूति पनि छन् उहाँसँग । निरङ्कुश सामन्तहरूले झूठा मुद्दा लगाएको अनुभूतिदेखि समयमा खान र घर जानसमेत नपाई जनताको काम गरेको वर्तमान ज्यूँदैछ निलमसँग । हरेक उतार चढाव भोगेर आउनु भएका उहाँ जनताका प्रिय नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
बाल्यकालदेखि नै शिक्षा र जनताको हित हुने काममा रूचि राख्ने निलम खनालले सुरुवाती शिक्षा गाउँकै स्कुल भगवती प्राविमा लिनुभएको थियो । विद्यार्थी अवस्थामै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिनु भएका उहाँले ७ सम्मको शिक्षा जनता निमाविमा र एसएलसीसम्मको शिक्षा जनसेवा मावि रमाइलोबाट सम्पन्न गर्नुभएको थियो । महेन्द्र मोरङमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुभएका उहाँले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि शिक्षालाई नै दाउमा राखेर कष्टसाध्य भूमिगत राजनीति जीवन बिताउँदै आउनुको थियो । राजनीति र समाजसेवालाई सँगै अगाडि बढाउनु भएका खनालले सरकारी स्कुलको शिक्षकदेखि नगरप्रमुख भएर काम गरी सक्नुभएको छ । हाल उहाँ नगरप्रमुखकै भूमिकामा हुनुहुन्छ । आर्थिक र राजनीतिक संकटका पहाड छिचोल्दै आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नुभएका उहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
बाल्यकालदेखि नै कसैसँग झगडा नगर्ने, कसैलाई अन्याय अत्याचार नगर्ने र त्यस्ताबाट टाढै रहने निलम खनाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमाफर्त परिवर्तन र जनताको मुक्ति आन्दोलनमा लाग्नुभएको हो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलबाट प्रभावित हुनुभएका खनाल २०३७ सालमा अनेरास्ववियु प्राक सदस्य, २०३८ देखि ४० सम्म अनेरास्ववियु मोरङको जिल्ला कमिटी सदस्य, २०४२÷४३ सालमा अखिल भारत प्रवासी नेपाली संघको केन्द्रीय सदस्य, इटहरी गाउँपार्टी कमिटी सदस्य, इलाका कमिटी सदस्य, भरौल गाविसमा एमालेबाट उम्मेदवार बनी गाविस उपाध्यक्षमा निर्वाचित, तीनपटकसम्म सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्य भएर काम गर्नुभएका खनालले विधिवत रूपमा भने २०३८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको सदस्यता लिनुभएको थियो । उहाँले मालेको सक्रिय दलमा रहेर इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुभयो, पार्टीको घोषित नीतिअनुुुुुुुुुुुसार बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारमा लागेर हिँड्नुभयो । राजकाज अपराधमा जेल सजाय , यातना र जरिवाना व्यहोर्नु भयो, २०४२ सालको बमकाण्डमा संलग्न रहेको भनेर निरङ्कुश शासकले फक्राउ गर्ने भएपछि पार्टी कामलाई निरन्तरता दिन भारतको बनारसमा गएर भूमिगत राजनीति गर्नुभयो, भोकभोकै बस्नुभयो त्यहीँ मदनकुमार भण्डारीलाई भेटेर उहाँको निर्देशनमा पार्टीको काम गर्नुभयो, पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार जनता जगाउ अभियानमा लाग्न भोजपुर पुग्नुभयो, दिउँसो पढाउँदै बेलुका बेलुका पार्टीको काम गर्नुभयो, निरङ्कुशताका विरुद्ध प्रगतिशील चेतना जनतामा फैलाउनुभयो, निरङ्कुशताका विरुद्ध जेहाद छेड्न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवनको परवाह नगरी भूमिगत राजनीति गर्नुभयो, जस्तोसुकै हण्डर ठक्कर सहेर राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुभयो, परिवर्तनका लागि पञ्चायती सामन्तहरूको यातना सहनुभयो, सतिसाल बनेर राजनीतिमा खडा भइरहनुभयो । उहाँको यो अविचलित राजनीतिक यात्राले अन्य राजनीतिज्ञलाई पनि साहस पैदा भयो यो उहाँको ठूलो योगदान हो । गाउँ, इलाका कमिटी सदस्यदेखि जिल्ला पार्टी सचिवालय सदस्य, निर्वाचित गाविस उपाध्यक्ष र नगर इञ्चार्ज भएर काम गर्दै अगाडि बढ्नु भएका उहाँ हाल बराह नगरप्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ ।
सन्तोष छैन केही :
नेपाली जनताको सुखी जीवन बनाउने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भनेर जीवनको बलिदान चढाएर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका निलम खनाल अहिलेको पार्टीको अवस्था, नेताहरूको स्वार्थ राजनीति, गुट, उपगुट, चाकडी, चाप्लुसी, पाखण्डपन, योगदान, आस्था र निष्ठाको क्षयीकरणले पार्टी र सरकार बद्नाम हुँदै गएको र यसमा टेकेर जनविरोधी र राष्ट्रघातीहरूले चलखेल गरिरहेको भन्दै खनाल चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । तथापि यही पार्टीलाई सुधारेर लानुको पनि उहाँ विकल्प देख्नुहुन्न ।
त्याग र समपर्ण :
विद्यार्थी अवस्थादेखि नै समाजप्रति सचेत र समर्पित निलम खनालले जीवनको परवाह नगरी सबै जोखिमसँग लड्नुभयो, भूमिगत जीवनको कठिनतम अवस्थामा ज्यानको परवाह नगरी संगठन र पार्टीलाई बचाउन योगदान गर्नुभयो, सबैको मन जितेर राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो । सबै जिल्लावासीलाई मिलाएर लैजान भूमिका खेल्नुभयो, कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्नुभयो यो उहाँको राजनीतिक त्याग र समर्पण हो । उहाँले मात्र होइन उहाँकी धर्मपत्नी रामविना खनालले समेत राजनीतिमा उहाँलाई, पार्टीलाई र बराहावासीलाई सहयोग पु¥याउनुभएको छ, यो महत्वपूर्ण देन हो ।
विकास आफैँले गर्नुपर्छ :
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं बराहा नगरपालिकाका प्रमुख निलम खनाल पार्टीका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको कार्यशैली र मान्छेका मनहरू देखेर अचम्ममा परेको र मुलुक तत्काल परिवर्तन हुने कुरामा आशंका रहेको सुनाउनुहुन्छ । नेपालका नेतादेखि कर्मचारी र जनताको सोच, शैली, आचरण, व्यवहार र सिस्टममा खोट रहेकाले यसलाई परिवर्तन नगरिकन मुलुकमा शान्ति , स्थिरता, विकास र समृद्धि प्राप्त नहुने बताउनुहुन्छ । यसलाई सम्भव बनाउन सोच, व्यवहार र सिस्टममै परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक क्रान्तिको यात्रा अगाडि बढाउनु भए पनि त्यसमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र अन्य पार्टीले सहयोग नगरेकोले जनताले सोचेअनुरूप काम हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जनता सुखी नहुञ्जेल नेताले आफूलाई होइन देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले नेकपाको दुई तिहाईनजिकको स्थिर सरकार भएकोले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुुशासनको सुरुवात गरेर जग्गा बाँझो राख्न नदिने, बाँझो जग्गालाई उत्पादनमा लगाउने कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाई कृषि र पर्यटनको क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । युवालाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । चीन, भारतका बजारमा हाम्रा उत्पादन भरिभराउ बनाउनुपर्छ, कृषिबाटै अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । यो काम जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ
स्वभाव र शैली :
अधिकांश समय राजनीतिमा लगाउने निलम खनाल मेहेनती, मिलनसार, स्वाभिमानी, अर्काको हितमा काम गर्न उत्साहित हुने, देश, जनता र पार्टीका लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार हुने क्रियाशील नेतामा पर्नुहुन्छ । हरेक काम कुरालाई परिणाममा हेर्ने र उत्पादनमा जोडिन चाहने उहाँ सबैलाई सृजनशील र दक्ष बन्न प्रेरित गर्नुहुन्छ । उहाँ अप्ठ्यारो परेको बेला सामथ्र्यअनुसार सबैलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुहुन्छ र त्यहीँअनुसारको आचरण र व्यवहार गर्नुहुन्छ । यसले उहाँलाई अगाडि बढ्न सहयोग पु¥याएको छ । उहाँ बराहाको नगरपिता भए पनि सबैलाई समान देख्नुहुन्छ त्यहीअनुसारको आचरण र व्यवहार गर्नुहुन्छ, जनताको काममा लागिरहनु हुन्छ । उहाँमा समाजलाई केही दिएर जाऔँ भन्ने सकरात्मक सोच छ, यही सोच, शैली र स्वभावले उहाँलाई असल नेता र जनप्रिय नगरपिता बनाएको छ ।
नगरप्रमुखको रूपमा गरेका काम :
पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर काम गरिसक्नु भएका नेकपाका जिल्ला नेता तथा बराहा नगरपालिकाका मेयर निलम खनाल २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनमा अत्याधिक मत ल्याएर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ प्रमुख भएपछि शासनमा होइन विकासमा समान सहभागिता र सहकार्य भन्ने योजनाका साथ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक पार्न सिंगो टिमका साथ अगाडि बढिरहनुभएको छ । जसअन्तर्गत नगरभित्रका सबै सडकहरू स्तरोन्नति गर्ने, ग्राभेल गर्ने, पिच गर्ने, फराकिला पार्ने, नगरभित्र सबै ठाउँमा सडक पु¥याउने, दूध, माछामासु र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने जुन भइसकेको छ, कृषिलाई औधोगिक र आधुनिकीकरण गर्ने, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन यहीँ गर्ने, त्यसलाई बाहिर बेचेर आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने, खानेपानी समस्या समाधानका लागि डिप बोरिङ गर्ने, नगरलाई हराभरा बनाउन बिरूवा रोप्ने योजना लागू गर्ने गरी काम भइरहेका छन् । शिक्षाको सुधारका लागि २ वटा क्याम्पसका भवन बनिरहेका छन्, नगरअस्पताल सञ्चालनमा छ, बालिविज्ञान क्याम्पस र इलेक्ट्रोनिक क्याम्पस बन्दै छ । यहाँ सञचालनमा रहेको बहुमुखी क्याम्पसलाई अझ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने योजना छ, दुई वर्षभित्र नगरका सबै सडक फराकिला र पिचयुुक्त हुनेदेखि खानेपानी र पर्यटन विकासमा समेत नगर अगाडि बढ्ने योजना रहेको र कतिपय कामसमेत भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जीवनलाई फर्केर हेर्दा :
राजनीति गर्दा होस् वा विकास निर्माणका काम गर्दा होस् जस्तोसुकै चुनौती छिचोल्न तयार हुने निलम खनाल देश र जनताको पक्षमा लड्ने नेता हुनुहुन्छ । किसान परिवारबाट आएको एउटा किसानको छोरा राजनीतिक उतार चढावका थुप्रै छालहरू पार गरेर गरिबी पन्छाउँदै, निरङ्कुशतासँग लड्दै जनताको सेवामा अविचलित लागिरहनु चानचुने विषय होइन, जुन उहाँले गर्नुभयो । विरोधीसँग डटेर काम गर्नु, पार्टी निर्माण र विस्तारको काम गर्नुभयो, यो उहाँको महान राजनीतिक काम हो । यही कामले उहाँलाई यो उचाइ दिएको छ, उहाँलाई सिंगो प्रदेशले चिन्ने नेता बनाएको छ । यो पार्टी र उहाँको परिवारका लागि सन्तुष्टि हो । यही बलमा उहाँले नगरका जनतालाई समृद्ध पारिरहनुभएको छ । नगरप्रमुख खनाल थप्नुहुन्छ ‘भावी सन्ततिको लागि पनि गर्नुपर्छ’ । नगरप्रमुखको यो दृढ विश्वासमा धेरै कुरा पाउन सकिन्छ ।
साथीको नजरमा निलम :
उहाँ मिलनसार स्वाभाव भएको, कसैलाई नराम्रो नगर्ने जनताको हितमा रातदिन खट्ने, अन्याय कसैलाई हुन नदिने परिर्वतनकारी र विकासमा बढी चाख दिने नगरप्रमुखको छवि बनाएका नीति सिद्धान्त र निष्ठाप्रति अविचलित एवं दृढ नेता भएको उहाँका मिल्ने साथीहरू बताउनु हुन्छ ।
जीवनचक्रको ६ प्वाइन्ट :
मेघालयको जन्म, सुनसरीको कर्म
आमाको कडा मिजासले मेरो जीवन सफल ।
नगरको विकास मेरो भोक ।
बमले बनारस पु¥यायो ।
बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्दा अहिले पछुतो ।
घरमा चेकद्वारा कारोबार ।